Vis ည့်သည်များကြည့်ရှု၊ အထွက်၊ အချိန်မှန်ဝယ်ပါ။ | Martech Zone
Vis ည့်သည်များကြည့်ရှူပြီးထွက်ကြည့်ပါ၊ Real Time တွင် ၀ ယ်ပါ။
တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 27, 2012 တနင်္ဂနွေ, သြဂုတ်လ 26, 2012 Douglas Karr
Analytics သည်သင့်အားအွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းအတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်သင်လိုအပ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာတန်းစီမှုများကိုအမြဲတမ်းပေးသည်မဟုတ်ပါ။ Lexity တွင် app တစ်ခုရှိသည်။ Lexity တိုက်ရိုက်ဖောက်သည်များကြည့်ရှုခြင်း၊ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီ ၀ ယ်ခြင်းများကိုလေ့လာရန်ခွင့်ပြုသည် Lexity Live သည်အခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤတွင်တစ် ဦး ပျက်ပြားပါတယ် Lexity တိုက်ရိုက် သူတို့ရဲ့ site မှ (ထိုကြည့်ဖို့သေချာပါစေ Live Demo):
သင့်ဖောက်သည်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအချိန်မှန်တွင်စောင့်ကြည့်ပါ Lexity Live သည်အခမဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အသွားအလာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Google Analytics ကဲ့သို့သောအခြားကိရိယာများသည်အချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်အချိန်ယူရပြီးသင်တုန့်ပြန်ရန်အလွန်နောက်ကျလိမ့်မည်။ Lexity Live ဖြင့်လက်ရှိဆိုက် visitors ည့်သည်များနှင့်ပတ်သက်သည့်အချိန်နှင့်တပြေးညီသတင်းအချက်အလက်များကိုသင့်ဖောက်သည်များအားသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အမျိုးအစားစာမျက်နှာများကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာများမှသင်၏ထုတ်ကုန်များအကြောင်းလေ့လာခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင့်စတိုးဆိုင်ရဲ့အသွားအလာကိုခြေရာခံပါ - အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသင်၏အလုပ်အကိုင်အမြင့်ဆုံးနာရီများသည်သင်၏ဖောက်သည်များမည်သည့်နေရာမှလာသည်နှင့်သူတို့ရှာဖွေနေသည့်အရာတို့ကိုခြေရာခံနေစဉ်၊ ထူးခြားသော visitors ည့်သည်များ၊ စာမျက်နှာများကြည့်ခြင်း၊ သော့ချက်စကားလုံးလမ်းကြောင်းများ၊ ထိပ်တန်းရည်ညွှန်းသောဆိုက်များ၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့်ပထဝီဝင်နေရာချထားမှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများကိုကြည့်ပါ။
သင့်ရဲ့ဖောက်သည်များအချိန်ဖြုန်းဘယ်မှာကြည့်ပါ - သင်၏ဖောက်သည်များသည်မည်သည့်စာမျက်နှာများကိုကြည့်ပြီးမည်မျှကြာအောင်ကြည့်ကြသနည်း။ သူတို့ဘယ်မှာလဲကျဆင်းနေတာလဲ ဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီကိုခြေရာခံခြင်းနှင့်သူတို့၏အီလက်ထရွန်နစ်ရောင်းဝယ်ရေးစတိုးဆိုင်တွင်သူတို့၏အချိန်နှင့်အမျှအပြုအမူများကိုမြင်ခြင်းဖြင့်ရှာဖွေပါ။ ထူးခြားသော visitors ည့်သည်များအတွက်အသေးစိတ်လမ်းကြောင်းနှင့်စာမျက်နှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအစီရင်ခံစာများတွင်ဒုတိယအနေအထိဆိုက်ပေါ်တွင်အချိန်ပါဝင်သည်။
Lexity အချို့ရှိပါတယ် အခြားပေးဆောင်ရသောအက်ပ်များ စျေးဝယ်ခြင်း၊ ဂူဂဲလ်စျေးဝယ်ခြင်း၊ Quick Chat၊ Pinterest အစီရင်ခံစာနှင့် Remarketing အပါအ ၀ င်သင်ထပ်ထည့်နိုင်သည်။ စာရင်းသွင်းပါ Lexity တိုက်ရိုက် သို့သော်အခမဲ့!
Tags: နတ်သမီးlexity တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှmagentoအချိန်မှန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအချိန်မှန်အချိန်မှန်shopifystats
Amit Kumar က
သြဂုတ်လ 27 ရက် 2012 ခုနှစ် 2:42 နာရီ
ပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Douglas! အဲဒါကို ဖတ်ရတာ သဘောကျတယ်။ သင် သို့မဟုတ် သင့်စာဖတ်သူများတွင် Lexity နှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။
သြဂုတ်လ 27 ရက် 2012 ခုနှစ် 3:59 နာရီ
အကောင့်ဖွင့်ပြီး စမ်းသပ်ရန် @twitter-14135545:disqus ကို သုံးစွဲသူတစ်ဦးထံ မှတ်စုတစ်ခု ပေးပို့ပြီးဖြစ်သည်။